CHANEL အနီရောင်ပိုက်ဆံအိတ် WOC Double Zip Chain Shoulder Bag L56 - hannari-shop
CHANEL ကွင်းဆက်တွင်စစ်မှန်သောအနီရောင်ပိုက်ဆံအိတ် WOC Double Zip Chain ပခုံးလွယ်အိတ်စောင်သိုးမွေးသားရေ L56
သင့်အားဤလူကြိုက်များသော Wallet On Chain / ပခုံးလွယ်အိတ်ကိုသင့်အားတင်ပြလိုပါသည်။ ၎င်းကိုဖြုတ်တပ်နိုင်သောသိုင်းကြိုးချွတ်ခြင်းအားဖြင့်သာမန်ပိုက်ဆံအိတ်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့အရွယ်အစားပေါ်မူတည်။ တစ်ကိုယ်ထည်အိတ်အဖြစ်။ ယေဘုယျအား Excellent ကြိုတင်ပိုင်ဆိုင်အခြေအနေ။ ကျေးဇူးပြုပြီးအဲဒါကိုလက်မလွှတ်ပါနဲ့
ပိုင်ရှင်အချို့အတွက်သင်စိုးရိမ်ပါသလား ထိမိခဲ့တယ် အသုံးအဆောင်အိတ်များ? ဘယ်သူ့ကိုအိတ်တွေယူလာတာလဲ။ ကုန်သည်များ၏စျေးကွက်မှအိတ်များကို ၀ ယ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုအချက်အလက်များကိုနားမလည်နိုင်ပါ။ ငါတို့ထံမှ ၀ ယ်ယူခြင်းကြောင့်သင်ဟာစိတ်ရှုပ်စရာမလိုပါ။ ငါတို့ ပိုးသတ်ဆေး နှင့် deodorant သင့်ကိုလွယ်ကူစေရန်နှင့်သင့်တော်ပြီးဘေးကင်းသောအိုဇုနျးမီးစက်ကိုအချိန်တိုအတွင်းအသုံးပြုခြင်းဖြင့်အိတ်အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေ မင်းလက်ခံတုန်းက ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ၀ န်ထမ်းများသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအိတ်များကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်ထောင့်တိုင်းကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။ နောက်ဆုံးတော့အိတ်တွေကမင်းကိုစောင့်နေလိမ့်မယ် ကလစ် "စျေးဝယ်ခြင်းထဲသို့ထည့်သည်" ကျနော်တို့ကအစိုဓာတ်ကို / နေရောင်ခြည်ဒဏ်ခံစီမံခန့်ခွဲအိတ်အပ်နှံသိုလှောင်ခန်းထဲမှာသယ်ဆောင်ပြီးနောက်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျပန်အမျိုးသားပြည်သူ့လုံခြုံရေးကော်မရှင်မှလိုင်စင်ရထားသည့်ဒုတိယအရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါသည်။ လိမ်လည်မှုမှကာကွယ်ရန်ဂျပန်အစိုးရအနေဖြင့်တပတ်ရစ်ကုန်သည်များအားလုံးလိုင်စင်ရရှိရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်နေရာတွင်ကုန်သည်၏စျေးကွက်၏အသင်းဝင်ဖြစ်သည် သာအစစ်အမှန်အိတ် ရောင်းလို့ရပါတယ်
ကျွန်ုပ်တို့သည် 1400 အစစ်အမှန် CHANEL အိတ်များကိုရောင်းချခဲ့သည် ငါးနှစ်အတွင်း eBay ပေါ်မှာ။ ဖောက်သည်များစွာတို့သည်ငါတို့ထံမှလှပသောအိတ်များလက်ခံရရှိသည်။ သူတို့အိတ်နဲ့ပျော်လား ကျေးဇူးပြု၍ အချို့ကိုကိုးကားပါ တုံ့ပြန်ချက်:
ကျွန်ုပ်တို့၏စတိုးဆိုင်တွင် 1400 တုံ့ပြန်ချက်များကျော်လွန်ပြီး ၀ ယ်သူအားလုံးနီးပါးကကျွန်ုပ်တို့အားအကောင်းမြင်သဘောထားရှိစေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တုန့်ပြန်ချက်ကကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်အိတ်များကိုမှန်ကန်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ထောက်ပံ့ခဲ့ပြီးဖောက်သည်များကကျွန်ုပ်တို့ကိုကျေနပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်မှာအရေးအကြီးဆုံးမှာကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များဖြစ်သည် ပျြောရှငျသော.
သင် ၀ ယ်ပြီးနောက်
ကျနော်တို့ပစ္စည်းကိုဂရုတစိုက်ထုပ်ပိုးပြီးခြေရာခံဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူအစာရှောင်ခြင်းလမ်းဖြင့်ထုတ်တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။ သင်ဒါကိုမစောင့်နိုင်ဘူး နောက်ဆုံးသင်အထုပ်ကိုလက်ခံရရှိပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစွာဖွင့်လိုက်ပါ။ ထိုအခါသင်လိုချင်သောအိတ်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ သင်အိတ်ကိုပခုံးသို့မဟုတ်လက်ဖြင့် ၀ တ်ဆင်နိုင်ပြီးမှန်ထဲရှိထောင့်အမျိုးမျိုးမှသင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ မင်းပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပတ်သတ်တဲ့အခါငါတို့အတွက်အရေးကြီးတယ်။ မ ၀ ယ်ခင်ဒီမှာဒီမှာအမှားအယွင်းတစ်ခုခုကိုဖြေရှင်းကြရအောင်။ ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အငါတို့အတတျနိုငျဆုံးလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ မည်သည့်မေးခွန်းများမေးရန်အခမဲ့ခံစားရပါ။ သင့်အိတ်ကမင်းကိုစောင့်နေတယ် ငါတို့သည်သင်တို့၏ဝယ်ယူဘို့မျှော်လင့်နေကြသည်။
ယေဘုယျအား: 8 ၏ 10
အပြင်ဘက်တွင်အလွန်အနိမ့်ဆုံးအသုံးပြုမှုနိမိတ်လက္ခဏာနှင့်အတူအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ မှတ်သားလောက်သောခြစ်, scuff အမှတ်အသားများသို့မဟုတ်အစွန်းအထင်းမရှိပါ။ အတွင်းပိုင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအလွန်သန့်ရှင်းသည်။ ချည်နှောင်ခြင်းနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲအားလုံးသည်တောက်ပပြီးအလွန်ကောင်းသည်။ ဖုန်မှုန့်အိတ်နှင့်သေတ္တာများသည်အလွန်ကြီးသည်။ အထူးအကြံပြုလိုတယ်!
မှို - NO / ရေမွှေး: NO / စီးကရက် - မ
၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းနှစ် ဦး ကဆုံးဖြတ်ပြီးတစ် ဦး ချင်းအပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ သင်အနံ့ခံနိုင်လျှင်ဝယ်ယူမှုကိုရှောင်ပါ။
ခန့်မှန်းခြေ အရွယ်အစား: H3.5 "x W7.2" x D1.1 "(H9 x W18.5 x D3 စင်တီမီတာ)
ခန့်မှန်းခြေ သိုင်းကြိုးတစ်ချောင်း: 23.6 "(60 စင်တီမီတာ)
Serial #: 22783832 (စတစ်ကာနှင့်ကဒ်ရှိတူညီသောနံပါတ်။ )
အစစ်အမှန်ကတ်၊ ဖုန်အိတ်၊ သေတ္တာ
ဓာတ်ပုံများတွင်တွေ့ရသောမန်းကွန်သည် US6အရွယ်အစားအဝတ်အစားများဝတ်ထားသည်။ အဝတ်အစား၊ မန်းကနင်နှင့် iPhone တို့မပါပါ။
သွင်းကုန်အခွန်အခများသည်ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်း (သို့) ရေကြောင်းပို့ဆောင်စရိတ်များတွင်မပါပါ။ ဤစွဲချက်များသည် ၀ ယ်သူ၏တာ ၀ န်ဖြစ်သည်။ လေလံ / ၀ ယ်ယူခြင်းမတိုင်မီမည်သည့်ထပ်ဆောင်းကုန်ကျစရိတ်များဖြစ်လိမ့်မည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်သင့်နိုင်ငံ၏အကောက်ခွန်ရုံးကိုမေးမြန်းပါ။ အကောက်ခွန်ပုံစံများကိုကျွန်ုပ်တို့မမှန်မကန်ပြုလုပ်ပါ။